Resy lahatra satria nahoana... - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Raharisoa Nomenjanahary Marie Laurence, 62 taona, renim-pianakaviana, miasa tena, monina ao Andohabevava – Tsaramandroso Fianarantsoa
• Ahoana no nahafantaranao an’izany Rabeza izany ?
Voalohany indindra dia Mpamakafaka politika tao amin’ny fandaharana Tafa sy Dinika ny RFone Radio sy ny Dinika tao amin’ny MBS fianarantsoa no tena nahafantarako an’izany lehilahy izany. Nahaliana ahy tokoa ny fahasahiany miresaka ny momba ny gaboraraka teo amin’ny fitantanana ny tanàna, isaky ny amin’ny 1ora antoandro. Nandritra ny fihainoako azy tao amin’ireo radio ireo no nahafantarako fa kay Mpanolotsaina tao amin’ny Kaominina Ambonivohitry Fianarantsoa izy. Mpanabe ny olom-pirenena ihany koa no azoko ilazana an’i Rabeza. Tsy mitsahatra manentana ny tsirairay manko izy mba handray ny andraikitra feno eo amin’ny raharaham-pirenena. Ny tena nahaliana ahy mafy taminy dia izy mivelona tanteraka ny finoana katolika izay nanabeazana azy. Matoky mandrakariva izay fitondran’Andriamanitra izay tokoa i Rabeza.
• Inona no tena naharesy lahatra anao ka nahatonga anao angataka ny firotsahany ho Ben’ny Tanàna ?
Babony tanteraka aho ary tena resy lahatra tamin’ny resaka izay nataony. Mora takarina ny fandinihany, ary toa mifaningotra amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina ny firesany. Rehefa mitafa sy midinika manko izy dia averimberiny matetika fa raharaha ikambanana amin’ny vahoaka tokoa ny fitantanana ny Kaominina, tsy tokony hisy ny ankinafinafina (secrets). Noporofoiny tao amin’ny fandaharany mba ho ren’ny vahoaka manontolo ny tatitry ny zava-misy marina tao amin’ny fiadidiana ny tanàna.
Olombelona ihany anefa izy fa tsy anjely akory. Noho ny fahitako ny hatsaram-panahy ananany dia tsapako fa tena olon-kendry, tompon’andraikitra te hanarina an’i Fianarantsoa tokoa Ingahy Rabeza. Toa tsinjoko sahady manko fa izy irery no olona manana fahasahiana ka afaka handamina ny tanàna ary hamerina amin’ny laoniny ny fahadiovan’ny fitantanan-draharaha sy ny fitantanam-bola. Araka ireny resany ireny àry dia mino ny tenako fa hananany ny paikady tsara, ny fomba hahafahana mandoa ireo karaman’ny mpiasan’ny Kaominina tsy voaloa nandritra ny volana maromaro.
Koa rehefa hitako fa mamaly manontolo ny faniriko ny fihevitra sy ny fikasan-dRabeza ho an’ity tanàna ity dia nangataka azy aho mba hirotsaka ho Ben’ny tanànan’i Fianarantsoa. Eny somary sahirana ihany izy namaly tamin’ny voalohany saingy noho ny habetsahan’ireo mpanaraka ny fandaharana nangataka azy dia nanaiky ihany izy.
RAZAKA Soarivony, 59 taona, renim-pianakaviana, Mpampianatra, monina ao Ankofafa Fianarantsoa
Tamin’ny alalan’ny fandaharana “Tafa sy Dinika” (Radio RFone) sy ny “Dinika” (Radio MBS) no nahafantarako an-dRabeza. Nanabe sy nitaiza anay mpihaino manko izy mba ho tena tompon’andraikitra amin’ny maha olom-pirenena. Nahaliana ahy tokoa ny fandaharany satria nofoanany ny elanelana teo aminy sy ny mpihaino fa dia nentiny amin’ny endriky ny tafa sy diniky ny mpianakavy. Nampitsiry fahalalana ho ahy amin’ny tontolo manodidina, indrindra eo amin’ny mahaolom-pirenena. Raha nalaindaina aho teo amin’ny fandraisana anjara amin’ny lafiny politika, teo aloha, dia afapo ankehitriny fa tena mpanao politika mitsinjo ny soa iombonan’ny vahoaka tokoa i Rabeza. Izy no isany nandray anjara ka nanetsika indray ny hambopon’ny tsirairay mba hahafantatra ny marina, tsy ho mora fitahina ary handray anjara mavitrika amin’ny fanarenana ny simba sy lo eo amin’ny fiaraha-monina sy ny tanàna ary ny firenentsika. Olona sahy ary vonona hanarina izao fahapotehina miseho amin’ny tanàna izao i Rabeza. Tsy mora izany fa mila finiavana sy faharetana ary fandeferana ho an’ny tombon-tsoan’ny be sy ny maro. Mila fotoana koa anefa ny fanovana toe-tsaina satria fiaraha-monina zatra kolikoly, olona tia tena sy tsy miraharaha ny hafa no ezahina harenina. Teo no nampiavaka azy dia ny fahaizany miresaka ny zava-misy eto amintsika mba ho azon’ny olona tsotra takarina: nandray ohatra velona tamin’ny maha mpanolo-tsain’ny tanàna azy. Tsy nialokaloka tamin’ny hafa fa nijoro tamin’ny heviny ary nampahafantatra ny olona ny andraikiny no nataony. Vonona mandrakariva hihaino toro-hevitra, eny fa na kianina aza izy. Hainy koa ny nampifandray ny tranga iainan’ny olona amin’ny fanazavana arosony ka nahatonga ny olona hahatsapa bebe kokoa ny anjara toerany eo amin’ny fiaraha-monina. Teo koa ny fampianarana ny olona hahay hanadihady zava-misy sy handanjalanja ny mety ho azo andikana izany. Maro no manohitra azy saingy nijoro hatrany tamin’ny fahamarinana izy sady nihaino ny fanakianana ary nahay niaiky fahadisoana. Sahy nilaza ny marina na dia mety hanohintohana mpitondra am-perin’asa aza. Izay toetrany izay no tena tsy ampy amin’ny olom-pirenena ankehitriny. Mampahatsiaro tena ny tsirairay koa izy mba handinika amin’izay mety ho andraikiny amin’ny zava-misy (tsena maloto, hala botry, tanàna ratsy tantana…)
Koa ankehitriny rehefa resy lahatra amin’io finiavana lehibe irin-dRabeza hapetraka eto amin’ny tanànan’i Fianarantsoa io aho dia tapa-kevitra ary nangataka sy nampirisika azy hanao kandida Ben’ny tanàna ka manao ny fomba rehetra hanampiana azy. Tsapa amin’ny firesany fa te hametraka ny tanànan’I Fianarantsoa amin’ny toerana tokony hisy azy tokoa i Rabeza. Tsy maintsy tohanana izy satria ny olona manana fijery mahitsy toa azy irery no mendrika hitondra eto. Tsy hadino ny tanora ka nitaiza azy reo Rabeza mba hitondra ny faneva any aoriana mba tsy hiandry ny hafa hampandroso ny tanànany sy ny fireneny: “Tahio ny an-tegna fa ny an’olo tsy omeny”. Fanampin’izany rehetra izany dia tsapako fa mila ampiana sy omen-tanana ny olona efa manolo-tena sy sahy marina, ary vonona ny hiatrika izay rehetra mety ho fahasarotana eo amin’ny fanatanterahana ny famerenana ny hasin’ny tanàn’i Fianarantsoa
RAZANASENDRAMANANA Philibert Ignace, 41 taona, Raim-pianakaviana, mpanao asa tanana, monina ao Talatamaty Fianarantsoa
Ny fahenoko ny feony tao amin’ny radio MBS sy RFone no nahafantarako azy voalohany indrindra. Mpanaraka tsy tapaka io fandaharana Tafa sy Dinika io manko aho ary matetika dia mandray anjara amin’ny alalan’ny antso mivantana mihitsy. Indray andro àry dia nantsoiny hivory miaraka aminy avokoa ireo mpandray anjara tamin’ny antso, isan’ny voantso koa aho dia faly be fa nahita azy mivantana mihitsy. Teo aho vao tena nahatsapa fa olona mpandala ny fahamarinana i Rabeza. Tsy mivadibadi-dela izy fa mijoro amin’ny marina mandrakariva. Fady azy izany firaisana tsikombakomba amin’ny mpanao ratsy izany. Olona mpivavaka, matahotra an’Andriamanitra izy ary mitsinjo ny soa iombonana eo amin’ny fiainam-piaraha-monina. Sahy mijoro amin’ny marina tokoa i Rabeza.
• Inona no tena naharesy lahatra anao ka nahatonga izao firotsahany ho Ben’ny Tanàna izao ?
Izaho dia isan’ireo nangataka ny hirotsahan’i Rabeza ho ben’ny tanàna eto Fianarantsoa, satria raha naheno ny fandaharana Dinika nataony tao amin’ny MBS, mitohy ao amin’ny RFone, aho dia resy lahatra fa olona tahaka azy no ilaina ho mpitantana ny tanànan’ny Fianarantsoa. Izany no nanosika ahy hangataka azy handray ny fahefana hanarina ity tanàna malala izay hita fa tena latsaka ankaterena ity. Tsapako manko rehefa manaraka ny fandaharany fa olo-mazava saina, mahitsy fo ary miaina ao anatin’ny fahamarinana izy. Fady azy ny manaratsiratsy olona fahatany. Misy porofo avokoa ny zavatra lazainy ho ren’ny vahoaka. Tiako Fianarantsoa ka tiako raha olona toa an-dRabeza no hitantana azy satria ny tombontsoa iombonana no manahirana azy ka ambarany amin’ny vahoaka ny tsy mety rehetra eto Fianarantsoa. Koa ndao homen-tsika azy ny fahefana hanarenany ity tanàna malalan-tsika ity. Mirary soa anao aho Rabeza ho tahin’Andriamanitra hahaleo hahalasana ny fitantanana ny tanànan’ny Fianarantsoa.
HARIVOLA Onisoa, renim-pianakaviana, mpampianatra, monina ao Antarandolo Fianarantsoa
• Ahoana no fahafantaranao an’izany Rabeza izany ?
Ny fandaharana “Dinika” (Radio MBS) sy ny “Tafa sy Dinika” (RFone Radio), isaky ny amin’ny 1ora antoandro (alatsinainy ka hatramin’ny zoma) no nahafantarako an’Andriamatoa Rabeza. Io fandaharana nataony io dia fampianarana hanatanteraka asa am-pahamarinana. Nasongadiny foana tao amin’ny fandaharana ny hoe : “mba ho fahamarinana izay rehetra atao eo amin’ny fiainana andavanandro”, izany manko no antoky ny fampandrosoana. Manaraka izany dia fantatro fa Mpanolo-tsaina tsy nataho-maso-mena teto amin’ny tanànan’i Fianarantsoa Andriamatoa Rabeza. Kristianina katolika manko izy ka naneho ankarihary ny finoany. Olona matahotra an’Andriamanitra izy ka tsy niray tendro tamin’ireo mpambotry ny tanàna. Izy no ilay niady irery, ka nahasahy namaky bantsilana ireo fomba mamoetra nataon’ny Ben’ny tanàna teo aloha. Soa ihany fa teo izy, sahy nijoro ho vavolombelon’ny Fahamarinana.
Noho izaho mpanaraka tsy tapaka ny fandaharany tao amin’ny radio dia tsapako fa nitombo andro aman’alina ny fankafizako ny hevitra narosony. Voavaliny, araka ny tokony ho izy avokoa manko ireo fanontaniana izay napetraky ny olona mivantana tamin’ny antso an-tariby. Nanomboka teo dia resy lahatra tanteraka tamin’ny herim-po nananany ho fampanjakana ny fahamarinana ka dia tapa-kevitra ny nangataka azy hirotsaka Kandida ho fidina ho Ben’ny Tanàna eto Fianarantsoa aho. Vonona ny hanohana azy ny tenako, na dia hitako aza ny fahatsoram-piainany. Manohana an’Andriamatoa Rabeza ho Ben’ny Tanàna aho satria henoko aby ireo fanabeazana efa vitany tao amin’ny radio ka inoako fa ho mora aminy ny manatanteraka izany rehefa mahazo ny fahefana izy. Ny fahitako io toetra tsotra ananany io sy noho izy mahatsapa ny tena fahorian’ny vahoaka dia manosika azy amin’ny foko tokoa aho ho eo amin’ny toeran’ny Ben’ny Tanàna. Antenaiko manko fa hiarina amin’izay ny tanànan’i Fianarantsoa, ho foana ny kolikoly, rehefa Andriamatoa Rabeza no ho mpitantana. Handroso i Fianarantsoa raha io traikefa ananany io no ho tanteraka.